Mpanjaka vavy voalohany izay nanaiky any Jesoa Christy ho Andriamaniny i Ranavalona faha Roa teto Madagasikara.Voa taiza tamin'ny finoana christianina mantsy izy ka rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy dia nataon'i laharapamenany ny ampandroso ny finoana christianina indrindra fa ny finoana protestanta.
Koa be dia be ny fiangonana izy niorina nandrintry ny 15 toana nanjakany.
Niova ihany koa i Antananarivo satria afaka manorina trano amin'ny biriky sy vato amin'izay ny mponiny raha tsy azo atao izany taloha.
Nisy fifandirana teo amin'ny la Frantsa sy Madagasikara ka naha tonga ny fanafihana ny serana-tsambo ny toamasina.
Maty tao aorina kely ny mpanjaka vavy.
Ranavalona II was born Princess Ramoma in 1829 at Ambatomanoina, near Antananarivo in the central highlands.Ranavalona II succeeded to the throne upon the death of Queen Rasoherina on April 1, 1868.She became increasingly favorable toward the beliefs of the Christian religion.Declaring Madagascar a Christian nation, Ranavalona had the traditional royal talismans (sampy) burned in a bonfire and replaced their authority with that of the Bible;The queen authorized construction using brick and other durable materials within the walls of Antananarivo
queen reine mpanjaka madagascar malagasy antananarivo rova manjakamiadana dago Ranavalona Temple gasy malgache ranavalona 2 faha roa fiangonana eglise London missionary society Christian Chrétien reine chrétienne faravohitra ampah